Shijiazhuang Tianqiao ịgbado ọkụ Materials Co., Ltd.
Shijiazhuang Tianqiao ịgbado ọkụ Materials Co., Ltd e hiwere na 2007 emi odude ke 30 kilomita na ndịda ọdịda anyanwụ nke shijiazhuang. Trafficlọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị dị ezigbo mma naanị kilomita 20 n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke okporo ụzọ mba 107, dịkwa nso n'okporo ụzọ okporo ụzọ Shixing na Jingzan. Anyị nwere ike oru ike, zuru ezu ngwaahịa ule akụrụngwa mere na anyị nwere ike na-anụ ngwaahịa mma. Anyị ụlọ ọrụ mejupụtara mmepụta ngalaba, oru ngalaba, R&D ngalaba, QC & Laboratory, Sale ngalaba, Logistic ngalaba. Anyị gafere ISO9001: 2008 mma njikwa sistemụ nnabata.
Ngwaahịa Companylọ Ọrụ
Anyị na ngwaahịa na-agụnye iche iche nke ịgbado ọkụ electrodes na ika nke "Yuanqiao", "Changshan", dị ka ala carbon ígwè, Iow alIoy ígwè, okpomọkụ na-eguzogide ígwè, obere okpomọkụ ígwè, igwe anaghị agba nchara, igba ígwè, ike surfacing ịgbado ọkụ electrodes. Kindsdị mmiri dị iche iche dị iche iche dị iche iche na waya dị iche iche na ịgbado ọkụ na iche iche dị iche iche. Anyị na ngwaahịa nwere magburu onwe arụmọrụ, anụ àgwà, mara ịgbado ọkụ ịkpụzi, ezi slag mwepụ, ezi ikike iguzogide ajari, Stomata na mgbape, ezi na mụ edebe metal mechanics performance.Our ngwaahịa nwere magburu onwe arụmọrụ, anụ mma, mara ịgbado ọkụ ịkpụzi, mma slag mwepụ, ezi ikike iguzogide nchara, Stomata na mgbape, ọma na mụ edebe metal arụzi arụmọrụ.
A na-eji ngwaahịa ndị a n'ọtụtụ ebe akụ na ụba mba, dị ka igwe, nkà mmụta banyere ígwè, ụlọ ọrụ kemịkalụ, mmanụ ọkụ, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, ụlọ, Bridges, na ihe ndị ọzọ, a na-ere ngwaahịa ndị a na mba niile, yana nke ọma natara site na nnukwu ọrụ.
Anyị na ngwaahịa na-otu narị percent exported na-ere worldwidely, tumadi na US, Europe, South America, Australia, Africa, Middle East, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na wdg Anyị na ngwaahịa izute ahịa na-ekpo ọkụ na-anabata n'ihi na ndị magburu onwe ya mma, pụtara ìhè preformance na asọmpi price .
N'okpuru mmụọ nke "akacha mma, ịkwụwa aka ọtọ, mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ", anyị dị njikere iji nweta nkịtị mmepe na ike amamiihe niile nke ndị ahịa. Anyị na-ele anya na-eri nri ga-abara gị uru, mmekọrịta ga-adịte aka ma kwụsie ike n'etiti ndị ahịa na ndị na - ekesa ya n'ụwa niile. Anyị kwenyere na anyị ga-enweta ọmarịcha ọdịnihu site na mbọ anyị na-agba.